FILIPAI 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (FIL 4)
Ya mere, ụmụnna m, ndị m hụrụ nꞌanya, na ndị ihe ha na-agụsị m agụụ ike, unu ndị na-enye m ọṅụ, na ndị bụ ụgwọ ọrụ m nꞌihi ọrụ m na-arụ, bikonụ, guzosienụ ike nꞌime Onyenwe anyị.
Arịrịọ m na-arịọ Yodia na Sintiki bụ, ha biko, ha kwụsị ise okwu.
Ana m arịọkwa gị, ezi onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ, sị gị biko, nyere ụmụ nwanyị a aka idozi okwu ha, nꞌihi na ha abụọ bụ ndị so m rụọ ọrụ ikwusa ozi ọma nye ndị ọzọ. Ha sokwa Klement rụọkwa ọrụ, sorokwa ndị ọzọ mụ na ha rụkọrọ ọrụ rụọ ọrụ, bụ ndị ahụ e dere aha ha nꞌakwụkwọ nke ndụ ahụ.
Na-aṅụrịnụ ọṅụ mgbe nile nꞌime Onyenwe anyị. Ka m kwuokwa ya ọzọ, ṅụrịanụ ọṅụ!
Ọ bụghị na m nọ nꞌọnọdụ oke mkpa na ụkọ. Nꞌihi na amụtala m otu m ga-esi jiri ọṅụ nọọ nꞌọnọdụ ọ bụla, ma m nwere ihe ma m enweghị ihe.
Amụtala m otu m ga-esi nọọ mgbe ihe siri ike na mgbe ihe bara ụba. Amụtakwala m otu m ga-esi nwee afọ ojuju nꞌọnọdụ ọ bụla, ma ọ bụ mgbe m na-anọ agụụ, ma ọ bụ mgbe m rijuru afọ ma ọ bụ mgbe m nwere ihe dị ukwuu ma ọ bụ nꞌoge ụkọ.
Ma unu mere nnọọ nke ọma inyere m aka nꞌọnọdụ nsogbu nke m nọ nꞌime ya ugbu a.
Dị ka unu maara, na mmalite, site na mgbe m kwusaara unu ozi ọma tutuu ruo mgbe m si nꞌetiti unu pụọ, gaa Masidonia, ọ bụ nanị unu ndị Filipai, bụ ndị na-enyere m aka site nꞌinye m onyinye. O nwebeghị chọọchị ọzọ mere ihe dị otu a.
Ọ bụladị mgbe m nọ na Tesalonaika, unu ziteere m onyinye ihe karịrị otu ugbo, inyere m aka na mkpa m.
Ugbu a enweela m ihe nile na-akpa m mkpa, nꞌezie enweela m karịa ihe na-akpa m. Onyinye unu nyere m, nke Epafroditọs wetarạ, egboola mkpa m nile. Onyinye ndị a dị ka aja na-esi isi ụtọ a chụụrụ Chineke, nke ọ na-anabatakwa nke ọma.
Ugbu a ka otuto dịrị Chineke Nna anyị ruo mgbe ebighị ebi. Amin.
Keleere m ụmụnna nꞌime Kraịst nile nọ nꞌebe ahụ. Ụmụnna ndị mụ na ha nọ na-ekelekwa unu.
Ndị Kraịst nile nọ nꞌebe a na-ekele unu, karịsịa ndị nọ nꞌụlọ Siza.
FILIPAI 1 / FIL 1
FILIPAI 2 / FIL 2
FILIPAI 3 / FIL 3
FILIPAI 4 / FIL 4